China Snake Shape Aluminium Anụmanụ Hookah emepụta na ndị na -eweta ya Younghome
Nlereanya Mba. SY0133
ibu ibu 5kg
elu 88 sentimita
Mbukota 25*25*52 sentimita
MEAS 48*48*52cm/18 n'arọ
Ntak -ahọrọ anyị?
Anyị nwere patent nke anyị maka ọtụtụ ụdị. Ma ị na -ere ha na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị, ị gaghị echegbu onwe gị maka ịda iwu nke patent n'oge mmekọrịta anyị.
Anyị nwere ndị ọrụ na -ere ngwaahịa ọkachamara iji jikọọ gị. Mgbe ị zitere ajụjụ na ụbọchị ọrụ, anyị na -ekwe nkwa na ị ga -enweta azịza n'ime awa 12. N'ime ụbọchị na-abụghị ọrụ, anyị ga-aza n'ime awa 24.
Anyị nwere njikwa njikwa siri ike iji hụ na nyocha 100% nke ụdị ngwaahịa ndị a tupu ebufe. A ga -akpachapụrụ ngwongwo niile nke ọma, a ga -enyekwa pasent ụfọdụ nke akụkụ ahụ mapụtara nke ọma iji gbochie mmebi okporo ụzọ.
A ga -enye gị nkwupụta ahụ n'ime otu ụbọchị ịnata ozi zuru ezu. Imirikiti ngwongwo dị na ngwaahịa, anyị ga -ezipụ ozugbo ị nyechara iwu.
Sample ụzọ oge:
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ụdị nlele ọhụụ dịka eserese ahụ, ọ na -ewekarị ihe dị ka ụbọchị 15.
Ọ bụrụ na ị hazie n'ụdị dị adị, anyị nwere ike mezue ya n'ime otu izu.
Oge nnyefe uka:
Anyị nwere ụlọ ọrụ 6-storey abụọ. A ga-agwụcha nnukwu ngwongwo ngwa ngwa n'ime ụbọchị 7-30 dị ka usoro a siri dị.
Nke gara aga: Ejiji Dị Mfe Dị Mfe
Osote: Aluminium alloy unyi nnukwu efere
Hookah nke China
Ụlọ ọrụ Hookah
Mfe nko Hookah YH-SY026
Mgbochi mgbochi ike Hookah
Omenala Kere Ọdịdị Obi